शरीरमा फलाम तत्वको मात्रा कम हुँदा देखिने लक्षणहरू « Kakharaa
शरीरमा फलाम तत्वको मात्रा कम हुँदा देखिने लक्षणहरू
२७ साउन, काठमाडौं । फलाम तत्व शरीरको लागि अत्यावश्यक एक प्रकारको खनिज पदार्थ हो, जुन हाम्रोको स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक छ । हाम्रो शरीरमा रहेका सबै कोषहरूमा केही न केही मात्रामा फलाम मिसिएको हुन्छ । तर प्रायःजसो फलाम शरीरमा रहेको रातो रक्तकोषमा पाइन्छ । राता रक्तकोषहरूले हाम्रो फोक्सोबाट शरीरभरि अक्सिजन ढुवानी गर्छ ।
पोषकतत्वबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न शरीरमा फलामको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । फलामको आवश्यकता पनि मानिसको स्वास्थ्य, उमेर र लिङ्गमा निर्भर हुने गर्छ । महिलाहरू पनि सुत्केरी र गर्भवती महिलाको लागि थप फलामको आवश्यकता पर्छ भने अरूको तुलनात्मक रूपमा पुरुषको लागि कम मात्रामा फलाम आवश्यक पर्ने न्युट्रिसन नेपालले जानकारी दिएको छ ।
एउटा वयस्क महिलाको लागिसमेत एकदेखि ३ ग्रामसम्म फलामको मात्रा शरीरमा सञ्चित हुनु आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै, आइरनले स्नायु प्रणालीको प्रसारमा योगदान पुर्‍याउँछ । यदि हाम्रो शरीरमा आवश्यकभन्दा बढी फलामको मात्रा देखियो भने हाम्रो शरीरमा भविष्यका लागि यसको मात्रा सुरक्षित गरेर राख्ने सामथ्र्य समेत हुन्छ ।
औसत व्यक्तिले खानेकुराबाट आफूलाई चाहिने मात्रामा फलाम प्राप्त गर्ने गर्छ । तर त्यहाँ केही परिस्थिति हुन्छन् जहाँ हाम्रो आहारमा पूरक आइरनको मात्रा आवश्यक हुन्छ ।
फलामको कमीका कारण हुने एनिमिया छ ?
जब हाम्रो शरीरमा रहेका राता रक्तकोषिकाहरूमा पर्याप्त फलाम हुँदैन, त्यस्तो अवस्थालाई एनिमिया भएको मानिन्छ । शरीरमा पर्याप्त र स्वस्थ मात्रामा फलाम भएन भने शरीरमा रहेको रातो रक्तकोषिकाले प्रभावकारी रूपमा अक्सिजन पठाउन सक्दैन ।
रगतमा फलामको मात्रा कम हुँदा देखिने लक्षणहरूः
– थकान महसुस हुनु
– कमजोरी महसुस गर्नु
– चक्कर लाग्नु
– कुनै काममा ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ हुनु आदि ।
केटा र केटीको लागि बालापनको अन्तिम अवस्था वा किशोरावस्था अघिसम्म शरीरमा आइरनको मात्रा बराबर आवश्यक पर्छ । किनभने महिलाको मासिक धर्म सामान्यतया किशोरावस्था सुरु हुनुभन्दा पहिले हुँदैन ।
नवजात शिशुहरूलाई थोरै मात्रामा फलामको आवश्यकता पर्छ । उनीहरूले आमाको पेटमा हुँदा आमाको शरीरमा रहेको फलामको मात्रामा आधारित भएर आइरन प्राप्त गर्छन् ।
शिशुहरूलाई जन्मदेखि पहिलो ६ महिनासम्मका लागि दैनिक ०.२७ मिलीग्राम आवश्यकता पर्छ । जुन सामान्यतया स्वस्थ, स्तनपान गराउने शिशुहरूले आमाबाट नै त्यो मात्रा प्राप्त गर्छ ।
समय नपुगी जन्मिएको बच्चालाई अरूको तुलनामा धेरै फलामको आवश्यकता पर्छ । जन्मको समयमा कम तौल भएका बच्चाहरूलाई पनि धेरै मात्रामा फलामको आवश्यकता पर्ने न्युट्रिसन नेपालले जनाएको छ ।
यी हुन् फर्सीका बियाँका फाइदा, अध्ययन भन्छ– ‘दैनिक ५० ग्राम खाँदा ३५ प्रतिशत मधुमेह घट्छ’
एजेन्सी । मधुमेहका बिरामीले जीवनभर ‘सुगर लेवल’ नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि खानपानमा ध्यान
जाडो मौसममा तौल घटाउने ६ घरेलु उपाय
एजेन्सी । चिसो मौसम लागेसँगै मानिसलाई बढी खाना रुच्छ । खाना धेरै रुचेसँगै शरीरको तौल
यी हुन् कागती पानी पिउनुका फाइदाहरू
एजेन्सी । तपाई कागती पानी कतिको पिउनु हुन्छ ? यदि पिउनु हुन्छ भने खुसीको खबर
सुत्दा घुर्ने बानी छ ? यसरी हटाउनुहोस्
कतिपय मानिसमा सुत्दा घुर्ने बानी हुन्छ । यो समस्याले स्वयं व्यक्तिलाई भन्दा पनि सँगैको अर्को
निक्षेप निरन्तर घट्दै कर्जा बढ्दै
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप निरन्तर घट्न थालेको छ । बैंकर्स संघले सोमबार उपलब्ध गराएको
टेलिकमको फोरजी अपग्रेडसँगै हट्यो भीओएलटीईमा कल नलाग्ने समस्या
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा एउटा कल गरेर तत्कालै अर्को कल गर्दा कल नलाग्ने समस्या
कांग्रेस महाधिवेशन : ५२ मध्ये कुन जिल्लामा कुन पक्षका सभापति ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनहरू भइरहेका छन् । कांग्रेसले मंसिर १०